14 Ndima dzeBhaibheri dzevechidiki maKaturike | Matipi akasimba?
Kuve mudiki uye kuita basa raIshe chimwe chinhu chakakosha, kunyanya munguva dzino apo zvese zvinoratidzika zvakanyanya kuoma. Pwere dzinogara dzichichinja uye zvakakosha kuti uzive izvo Mavhesi eBhaibheri evechidiki Katolika kuti tinazvo pese patinoida.
Mavara esimba, kurudziro, muenzaniso uye kurudziro yakakosha kune vechidiki vakasarudza kushandira Ishe. Zvese zvinyorwa izvi zvakachengetwa mumanyoro matsvene uye isu tinofanirwa kuve nekuziva uye kunzwa nzara yeshoko rake, kuti timuzive zvakadzama.
Nhasi isu tinoda vechidiki kuti vatendeukire kutarira kwavo kuna She, isu takazara nezvakawanda zvivi, takarasika mukuchiva kwenyika uye vashoma kwazvo ndivo vanotora nguva yekusvikira Mwari uye izvi zvinofanirwa kuve chikonzero chekunetseka neruzhinji .
Kana iwe uchida kusvika pedyo naMwari uye uri jaya kana kana iwe uchinge uchimushumira iye asi uchitsvaga izwi rinokosha kwauri, zvirokwazvo magwaro aya anozobatsira zvakanyanya muzuva rako zuva nezuva.
1 1. Mwari anotsigira vadiki
2 2. Mwari ari padivi pako
3 3. Vimba nemasimba aMwari
4 4. Vechidiki rubatsiro rwaMwari
5 5. Ishe vanotidzivirira isu tese
6 6. Mwari vanopa zano vechidiki
7 7. Mwari ari padivi pedu
8 8. Gara uchifamba nekutenda
9 9. Tenda musimba raKristu.
10 10. Gamuchira kutenda mumoyo mako
11 11. Kumbira rubatsiro rwaMwari pazvinenge zvakakodzera
12 12. Kutenda kunokunda zvese zvipingamupinyi
12.1 13. Mwari tariro
13 14. Ndichagara ndiri pedyo naIshe
1. Mwari anotsigira vadiki
1 Samuel 2: 26 "Uye Samueri mudiki akange achikura, uye akagamuchirwa pamberi paMwari nepamberi pevanhu."
Mundima iyi yemubhaibheri tinoudzwa nezvemumwe murume wechidiki akakurira mutembere nekuti amai vake pavakazvara vakamupa kuna She naSamueri semwana akazviziva kuti kwaive kuve muranda waMwari. Muenzaniso wenyaya kune vese vechidiki veKatorike vanofunga kusarudza kushandira Mwari kubva vachiri vadiki.
2. Mwari ari padivi pako
Mateu 15: 4 “Nekuti Mwari wakaraira achiti: Kudza baba vako naamai vako; uye: Ani nani anotuka baba kana amai, ngaafe zvinoramba ”.
Izvi zvinozivikanwa semirairo yekutanga inotakura vimbiso uye zvinonakidza kuti haina kugadzirwa kune vechidiki chete asi kune wese munhuwo zvake. Nekudaro, vechidiki vanokodzera izwi iri sezvo vazhinji vavo vachipfuura nematanho akaoma uye ipapo Ishe vanovasiya nezano uye nevimbiso yehupenyu hwakareba.
3. Vimba nemasimba aMwari
Mariro 3:27 "Zvakanaka murume kupfeka joko kubva pahudiki hwake."
Vechidiki muna Mwari kana zvinogona kuva zvinorema asi zvinofadza kumushandira mumazuva apo simba nemweya wedu zvinoita kunge zana muzana. Vechidiki hwakanaka uye kana tikazvipa kuti tirarame pasi pemirawu yaMwari nezvisungo zvekutenda kwedu ipapo tichava nevechidiki vakaropafadzwa nguva dzose
4. Vechidiki rubatsiro rwaMwari
1 Timotio 4:12 "Ngakurege kuva neupi hwako hujaya, asi iva muenzaniso wevatendi mushoko, mufambiro, rudo, mweya, kutenda uye kuchena."
Nguva zhinji nekuda kweve vadiki nekutaura kuti tinoda kushandira muchechi kana kupa moyo yedu kuna She, isu hatina kubatwa zvakanyanya uye, pane zvinopesana, tiri kuseka, asi pano Ishe vanotipa zano uye vanotikurudzira kutora edu kusarudza kumutevera kunyange tichiri vadiki.
5. Ishe vanotidzivirira isu tese
119 Mapisarema: 9 “Jaya richanatsa nzira yake neiko? Nokuchengeta shoko renyu. ”
Nzira yeiyo mudiki weKatorike uye yewese munhu anotenda kutenda kwemoyo, inoda kugara ichicheneswa nekuti kazhinji inosviba tobva tagumburwa. Mundima iyi Mwari anotibvunza mubvunzo uye anotipa mhinduro yake. Nzira chete yekujekesa nzira yedu ndeyekuchengeta izwi raMwari.
6. Mwari vanopa zano vechidiki
Jeremia 1: 7-8 "Uye Mwari akati kwandiri: Usati: Ndiri mwana; nekuti uchaenda kune zvese zvandinokutumira, uye uchataura zvese zvandinokutumira. Usatya pamberi pavo, nekuti ndinewe kuti ndikusunungure, anodaro Mwari ”.
Kusagadzikana kunogona kuunzwa kwatiri nguva dzese, kunyangwe tine makore mangani, asi kana isu tiri vadiki, kusagadzikana uku kunoita sekunge kuri kuda kutora pfungwa dzako. Tinofanira kuva nechokwadi chekuti Ishe vanoenda nesu kwese kwese uye vanotitungamira kuti tiite zvinhu nenzira kwayo, anotisimbisa.
7. Mwari ari padivi pedu
1 VaKorinte 10:23 “Zvese zviri pamutemo kwandiri, asi hazvisi zvese zvakatinakira; Zvese zviri pamutemo kwandiri, asi hazvisi zvese zvinovaka.
Iyi ndima yemubhaibheri inoedza kutitaurira kuti kunyangwe tichigona kuita zvese, iko kutaura kuti isu tine chishuwo uye simba Kuti tiite zvese, kunyangwe kana izvi kana ini ndisina chandinoziva chakanaka, hatigone kuzviita nekuti hazvikodzere isu. Takasiyana nekuti isu takasarudzwa kubva paudiki hwedu kuti tishumire Mwari.
8. Gara uchifamba nekutenda
Tito 2: 6-8 Inokurudzirawo vechidiki kuti vave nehungwaru; kuzvimisikidza mune zvese semuenzaniso wemabasa akanaka; pakudzidzisa kuratidza kuperera, kukosha, inzwi rakapfava uye risingapindurike, kuti muvengi anyare, uye haana chinhu chakashata chekureva pamusoro pako.
Kurudziro yekuti hatidi chete pahudiki asi pazera ripi neripi. Chinyorwa chebhaibheri icho iwe chaunogona kupa kune shamwari kana kupa kuhama. Iyo inotsanangura zvakajeka uye zvakadzama maitiro edu maitiro haafanire kunge ari muchechi chete asiwo kunze kwayo.
9. Tenda musimba raKristu.
Zvirevo 20:29 "Kukudzwa kwevadiki isimba ravo, uye kunaka kwevakuru ndiko kuchembera kwavo."
Vechidiki, kazhinji, vane simba, vakasimba, vanotsika uye havatyi chero chinhu, asi ivo vakuru uye izvo zvavanenge vasiya ndiko kunakidzwa nehupenyu hwakanaka. Izvi zvinokwanisika chete kana isu tikatsaurira makore edu akanakisa kubasa raIshe uye isu tikabatwa nezvido zvemuviri.
10. Gamuchira kutenda mumoyo mako
2 Timotio 2:22 “Tizawo kuchiva kwevechidiki, uye enda Kururamisira, kutenda, rudo nerunyararo, neavo vanodana kuna She nomoyo wakachena ”.
Zvido zvevechidiki muvengi akasimba uye ndosaka tisingakwanise kuramba takatarisana nazvo asi isu tinofanirwa kutiza kubva pazviri nguva dzese. Pamwe kuva nehunhu husinga tsanangurike mune ino nzira ndeyekuseka asi ziva kuti mubairo unobva kuna Mwari kwete kuvanhu
11. Kumbira rubatsiro rwaMwari pazvinenge zvakakodzera
Pisarema 119: 11 "Mumwoyo mangu ndakachengeta zvirevo zvako, kuti ndirege kukutadzira."
Hapana chinhu chiri nani kupfuura kuzadza moyo wedu wechidiki nemashoko aIshe. Aya mazwi anowanikwa mushoko raMwari uye zvakakosha kuti tizvitakure zvakadzama mukati medu kuti kana isu tichida iwo magwaro kana mazwi anotipa simba nerunyararo, kuwedzera kutitadzisa kure nechivi.
12. Kutenda kunokunda zvese zvipingamupinyi
VaEfeso 6: 1-2 “Vana, teerera vabereki vako muna She, nekuti izvi zvakanaka. Kudza baba vako namai, unova murairo wekutanga une chipikirwa.
Kungo teerera vabereki vedu chete asiwo kuteerera Mwari, uyu maitiro anotanga mumba medu, kana uchiteerera vabereki vedu unenge uchizadzisa izwi raMwari uye iye achange ari mukutonga kuzadzisa vimbiso yake. Zvakanaka kuti titeerere vabereki uye Mwari, usambokanganwa izvi.
13. Mwari tariro
Pisarema 71: 5 "Nekuti imi, Ishe Jehovha, muri tariro yangu; Ndimi wandinovimba naye kubva pauduku hwangu. "
Mudiki atinozvitsaurira kushandira Ishe, zviri nani zvakanyanya. Kuve nehupenyu hwakapihwa kuna iye Mwari akatisika, uyo akatipa hupenyu, anotiperekedza nguva dzese uye anotida zvisina mhaka ndiko kudyara kwakanaka kwatingaite. Dai ari simba redu netariro kubvira isu vadiki.
14. Ndichagara ndiri pedyo naIshe
Joshua 1: 7-9 "Simba, utsunge moyo, kuti uchenjere kuita murayiro wose wandakaraira muranda wangu Mozisi; usatsauka kubva kurudyi kana kuruboshwe, kuti ubudirire pane zvose zvaunoita. Iri bhuku remutemo harifi rakabva pamuromo wako, asi uchafungisisa pamusoro paro masikati neusiku, kuti uchengete uye uite maererano nezvose zvakanyorwa mariri; nekuti kana ukadaro uchafambiswa nenzira yako, uye zvinhu zvose zvichakuitira zvakanaka; Tarisa, ndinokuraira kuti uite nesimba uye shinga; usatya kana kuvhunduka, nekuti Mwari wako achava newe kwese kwaunoenda ”.
Zano rakakwana uye rakakosha zano iri zvakare kukokwa kuzadza isu nesimba rako kutarisana nematambudziko. Isu tinofanirwa kushingirira uye kushinga, sevadiki maKatorike pane matambudziko mazhinji atinofanira kusangana nawo uye ndipo kana dare iri rikatora simba. Ngatisadaro Nzira dzaMwari Nekuti ndiye kambani yedu.
Tsvaga simba reaya mavhesi eBhaibheri nezano kune vechidiki vaKatorike.
Verenga zvakare chinyorwa ichi pane 13 ndima dzekurudziro y 11 ndima dzerudo rwaMwari.